Iinkonzo zokuNxibelelana -I-Shang Hai Tongke Flow Technology Co, Ltd.
Impompo yamanzi yalatha kakuhle
Impompo yokuhambisa amanzi ngokwakho
Impompo shaft Long
Impompo yokulwa umlilo
Ukucebisa nge-TKFLO ngempumelelo yakho
I-TKFLO ikhona ukucebisa abathengi bayo kuyo yonke imibuzo enxulumene neempompo, iivevini kunye nenkonzo. Ukusuka kwiingcebiso ekukhetheni imveliso elungileyo kwiimfuno zakho kuluhlu olubanzi lwempompo kunye nokukhethwa kwevalve.
Silapho ngenxa yakho-hayi kuphela xa kuziwa ekukhetheni imveliso entsha elungileyo, kodwa nakulo lonke ujikelezo lobomi beempompo zakho kunye neenkqubo. izibonelelo zonikezelo oluza kubakho, iingcebiso kulungiso okanye ukulungiswa, kunye nokugcinwa kwamandla okulondolozwa kweprojekthi.
Inkonzo yokubonelela ngezobuchwephesha ye-TKFLO inikezela ngezisombululo ezizodwa zokuqinisekisa ukusebenza ngokukuko kweempompo, iivevvu kunye nezinye izixhobo ezijikelezayo. Xa usenza njalo, i-TKFLO ihlala ijonga inkqubo iyonke. Ezona njongo ziphambili zintathu: kukuhlengahlengisa kunye / okanye nokwandisa iinkqubo ngokungqinelana neemeko eziguqukayo, ukufezekisa ukonga umbane kunye nokwandisa ubomi benkonzo yezixhobo ezijikelezayo zazo zonke iindlela.
Ukuthathela ingqalelo inkqubo iphela, iinjineli ze-TKFLO zihlala zizama ukufumana esona sisombululo sinoqoqosho. Ukusuka ekulungisweni kokusebenzisa izinto eziphuculweyo ngokukodwa, ukuphinda wenze iinkqubo zesantya eziguqukayo okanye ukubuyisela umatshini, sisebenza kunye nomthengi ukuphuhlisa isisombululo ngasinye. Zichonga eyona ndlela ifanelekileyo yokuhlengahlengisa iinkqubo ukuze zitshintshe iimeko, nokuba kukwindawo yobuchwephesha okanye kutshintsho lomthetho.
Ukubonelela ngezobugcisa: thembela kumava nakwindlela yokwazi
Inkonzo yokucebisa i-TKFLO yeempompo kunye nezinye izixhobo ezijikelezayo ineenjongo ezintathu:
B. Ukonga umbane
Umsebenzi wobomi bexesha elide nezixhobo ezijikelezayo zokwenza nayiphi na indlela
1. Ukuqinisekisa ukubonisana ngokufanelekileyo kwabathengi, iingcali zeenkonzo zeTKFLO zisebenzisa ulwazi kuwo onke amasebe eengcali zeTKFLO, ukusuka kwiNjineli ukuya kwiMveliso.
2. Ukulungelelaniswa kwesantya ukufezekisa ulawulo lwempompo olululo lweemfuno zenkqubo ezahlukeneyo
3. Ukulungiswa kwenkqubo ye-hydraulic, umzekelo, ngokufaka izixhobo ezintsha kunye neefoyisi
4. Ukusetyenziswa kwezinto eziphuculweyo ngokukodwa ukunciphisa ukonakala
5. Ukulinganisa iqondo lobushushu kunye neentshukumo zokungcangcazela ukubeka iliso ekusebenzeni kunye nemeko- kwisicelo, idatha ingahanjiswa ukude
6. Ukusetyenziswa kwetekhnoloji yeebheringi ezihlaziyiweyo (imveliso-ethambisiweyo) yobomi benkonzo ende
7. Iingubo zokuphucula ukusebenza ngokukuko
8. Izibonelelo zokucebisa ngobugcisa beempompo kunye nezinye izixhobo ezijikelezayo
9. Ukonga amandla ngokuphucula ukusebenza kakuhle
10. Ukunciphisa ukukhutshwa kwe-CO2 ngokulungiselela inkqubo
11. Ukhuseleko nokuthembeka ngokubek'esweni nasekuchongeni ukungangqinelani kwinqanaba lokuqala
12. Ukugcina iindleko ngobomi benkonzo obude
13. Izisombululo ze-Bespoke zeemfuno ezizodwa kunye neemfuno
14. Ingcebiso ngengcali esekwe kulwazi lomenzi
15. Ulwazi malunga nokwandisa ukusebenza kwamandla kwiinkqubo.
Idilesi yomzi-mveliso: No. 111, Shenjiabang Road, Qingpu District, Shanghai, China
Iselfowuni kunye neWhatsApp: 0086-13817768896